”Dib u eega waxaad soo samayseen!” – Lafa Gareen oo luuq cajiib ah uga soo baxay ragga ku shirsan Hotel Jazeera | Hadalsame Media
Home Wararka ”Dib u eega waxaad soo samayseen!” – Lafa Gareen oo luuq cajiib...
(Baydhabo) 25 Nof 2020 – Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, oo ka hadlayey munaasabad casho sharaf ahayd oo lagu sagootinanayey Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa ka hadlay arrimaha doorashada oo ay doodi ka joogto.
“Dadka hadda shiraya ee diiddan guddiyada maaha inay xumaan ka eegaan waxa wanaagsan ee aan samaynayno dib ha u fiiriyaan, waxay horay usoo sameeyeen, waxaan leeyahay ha u xiisina wixii xumaa ee aad horay u soo sameyseen.” ayuu ku dooday Lafta Gareen oo ka hadlayey magaalada Baydhabo oo ah xarunta KMG ah ee KG Somalia.
Lafta Gareen ayaa se tilmaamay in iyagu ay sameeyeen hab-raac toosan oo ay soo xuleen xubno uu magacyadooda madashaba ka sheegay oo uu sheegay inaysan wax xil ah hadda ka haynin Maamulka KG iyo DF Somalia midna.
Lafta Gareen ayaa dhega hadalkan ula jeeda in qaar badan oo ka tirsan musharrixiinta hadda duraya Guddiyada la magacaabay ay laftoodu horay u taageerayeen rag qabtay doorashooyin aan saaxi ahayn sida MW Jubbaland, Md Axmed Madoobe.
Previous articleLaba arrimood oo ay midi togan tahay midna taban tahay oo kasoo baxaysa kulanka MW Farmaajo & Gedu Andargacho
Next articleSomalia at a crossroad, UN envoy urges ‘deepened’ political consensus